IDolobha lithuthukisa abahlali ngohlelo lokufuya izinkukhu
eThekwini Municipality / Resource Centre / News / IDolobha lithuthukisa abahlali ngohlelo lokufuya izinkukhu
​Imiphakathi izohlomula ngokwezomnotho ngamapulazi amabili
azothengwa yiDolobha elizowasebenzisela ukufuya izinkukhu.
NGENHLOSO yokuthuthukisa imiphakathi, ukukhiqizwa kokudla, kanye nokuvula amathuba ezomnotho emkhakheni wezolimo, uMasipala weTheku uyaqhubeka nezinhlelo zawo zokuxhasa ukuthuthukiswa komkhakha wokufuya izinkukhu.
Lokhu kulandela isinqumo sesiGungu esiPhezulu seDolobha sokuthenga amapulazi amabili, i-Uitkomst kanye neDoornrug enkampanini yakwaRCL Foods Consumer (Pty) Ltd ukuze liwasebenzisele ukufuya izinkukhu. Imiphakathi yeTheku, ebandakanya nalabo abadilizwa enkampanini yakwaRainbow Chicken, bazogqugquzelwa ukuba basungule izinkampani zokufukula ezomnotho futhi babambe iqhaza kulama phrojekthi.
Imali yokukhokhela umhlaba angeke yedlule emalini engango R15 million njengoba umhlaba ungokaMasipala weTheku. IBamba leNhloko yoPhiko lezoThuthukisa amaBhizinisi, ezokuVakasha kanye nezokuKhangisa, uThulani Nzama uthe sebesihambisile isiphakamiso kwaRCL Food Consumer njengamanje sebelinde ukuthi siphasiswe. Uqhube wathi uma bethola izindaba ezimnandi ngalokhu, bazohlela amasu ebhizinisi kanye nawokukhangisa ngokushesha baphinde baqale nezingxoxo zokusebenzisana.
UNzama uthe lolu ngolunye lwezinhlelo ezinkulu zeDolobha okuhloswe ngazo ukufezekisa isethembiso sokuguqula isimo somnotho ngokuthuthukisa abahlali. Le phrojekthi izokwelekelela abalimi abasafufusa iphinde isungule namathuba emsebenzi. “Umkhakha wokufuya izinkukhu uyingxenye enkulu yomkhakha wezolimo, njengoba ungenisa imali engaphezulu kuka 16 phesenti wemali oyenza ngonyaka.
Uhlinzeka ngamathuba emisebenzi uphinde usebenzisane neminye imkhakha ethintekayo,” kwengeza yena. UNzama uqhube wathi lo mkhakha weseka amabhizinisi amaningi amakhulu, uphinde weseke nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya, futhi ufezekisa namaphupho kahulumeni okulwa nendlala njengoba uhlinzeka ngama-protein. “Lolu hlelo lenzelwa ukuhlomulisa abahlali okufaka phakathi nabasebenzi abadilizwa kwaRainbow abangasebenzisa isipiliyoni sabo ukusungula izinkampani ezizosebenza ngaphansi kwale phrojekthi,” kuqhuba yena.
USihlalo weKomidi lezokuThuthukiswa koMnotho, uKhansela uSipho Kaunda uthe umbono kahulumeni wokuthuthukisa isimo sempilo yabo bonke abahlali, ugqugquzela uMkhandlu ukuthi uzame izindlela ezahlukene zokudayisa ngenhloso yokuthuthukisa kanye nokufukula umnotho. “Sinamawadi amaningi asezindaweni zasemakhaya, abantu abahlala khona badla imbuya ngothi futhi abanayo indlela yokuziphilisa. Le phrojekthi izobuyisa ithemba kubo iphinde ithuthukise nomnotho njengoba abalimi behlala ezindaweni zasemakhaya,” kwengeza uKhansela Kaunda.